Rising Voices Any Sierra Leone Sy Bangladesh · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Avrily 2018 11:47 GMT
Nivoaka voalohany tao amin'ny Rising Voices.
Mikendry ny hanampy amin'ny fanarenana indray an'i Siera Leone taorian'ny ady an-trano ny hetsika Think Build Change Salone (TBCS). Ny fanofànana, momba ny TIC (Teknolojian'ny fampitàmbaovao sy ny Serasera), ireo tanora miasa toy ny mpizà-draharaha mandray karama ao amin'ny fikambanana tsy mitady tombony ao an-toerana no anaovany izany, mba hahazoan’ izy ireo traikefa arak'asa sady mandray anjara amin'ny tetikasa fampivoarana.
Tamin'ny Septambra, tantarain'i Vickie Remoe-Doherty, avy ao amin'ny Think Build Change Salone ny olana natrehany tamin'ny fikarohany tanora, mahay sy mazoto tao Freetown renivohitra.
Nahita tanora mpitarika 14 hampandroso ilay tetikasa TBCS ihany i Vickie ny farany ary azonao jerena eto ny mombamomba azy ireo. Naparitaka any amin'ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa maro manerana an'i Sierra Leone izy ireo. Hanomboka ny fanoratan-dry zareo ny traikefany any amin'ireny fikambanana ireny izy ireo rehefa tsy manahirana azy intsony ireo fitaovana haino aman-jery vaovao ireo.
Nosoratan'i Kadi Yata Kandeh (26 taona), mpianatra amin'ny taona fahatelo momba ny Sakafo sy ny fandanjalanjana sakafo, tena tsara naoty avy amin'ny Kolejin'i Fourah Bay ny traikefa voalohany. Navoakany ny mombamomba ny fikambanana ‘Mano River Women’s Peace Network (MARWOPNET)’ izay iasàny. Ny momba ny traikefany tamin'ny atrikasam-piofanan'ireo mpanofana tao Bo, antsoina hoe “Fandrisihana ny Fametrahana Fanairana Mialoha Sy Setriny”, no nosoratany tamin'ity volana ity. Ilay fiofanana dia mandrisika ireo vehivavy handray anjara mavitrika sy hitondra ny anjara biriky amin'ny fametrahana ny fandriampahaleman,a tsy ho an'i Siera Leone ihany fa amin'ny faritra manodidina ny reniranon'i Mano.
Sahr Emmanuel Joseph dia mpianatra taona faharoa amin'ny sampana toekarena any amin'ny anjerimanontolon'i Njala. Niditra ho mpianatra asa tao amin'ny Peace and Development Corp Program, tetikasa eo ambany fiahian'ny Vaomiera Nasionaly ho an'ny Hetsika Sosialy (NaCSA) izy. Tantarainy ao amin'ny lahatsoratra fampahafantarana nosoratany ny andraikitra tazoniny sy ireo traikefany tao. Manome torohevitra vitsivitsy ho an'ireo mpianatra asa manana fahaizamanao izy ary milaza :
Noah Suluku no mpizà-draharaha faharoa, tanora kokoa, 21 taona. Mizara sary vitsivitsy momba ireo ” Ankizin'ny Helodrano” mitsindroka fako izy.
Ato amin'ny fizaràna faharoa, dia jerentsika akaiky ireo hetsika vao haingana ao amin'ny bilaogin'ny Nari Jibon. Mikarakara fivoriana in-droa isambolana momba ny fivoarany ry zareo. Tamin'ny fivoriana farany tamin'ny faha-10 novambra 2007 dia nofintinin-dry zareo fa hatramin'ny nanombohana, lahatsoratra 105 no efa navoakany (amin'ny teny bangla sy teny anglisy) ary 32 mahery ao miandry havoaka.
Nahita mombamombanà mpitoraka bilaogy maromaro izahay navoaka tao amin'ny bilaoginy amin'ny teny bangla sy anglisy. Heverin'ireo mpitoraka bilaogy vaovao ireo fa ny ampahany manan-danja indrindra amin'io fikambanana io dia ny Cybercafé Nari izay misy ny solosaina hahafahan-dry zareo mitoraka bilaogy. Taorian'ny nahatongavan-dry zareo tao amin'ny Nari Jibon vao mba nahafantatra ny fanaovana bilaogy izy ireo ka faly sy maniry ankehitriny ny hizara ny tantarany amin'izao tontolo izao.
Mihevitra i Sherin Sultana fa tsy miavaka izy satria avy amin'ny fianakaviana amin'ny sokajy antonony. Soritsoritany ny fepetra ilazàna fa mpikambana avy amin'ny fianakaviana sokajy antonony :
Nankany amin'ny faritra mahantra iray ao Dhaka i Nina Sultana ary niaina akaiky ny fahantran-dry zareo sy ny hasarotan'ny fiangaly fiainan-dry zareo. Miaina anaty tontolo maloto ireo mponina any amin'ny ‘faritra iva’. Tsy mba manana sakafo vao, rano ary fialofana tsara ry zareo. Mijaly amin'ny hanoanana, ny tsy fahampian-tsakafo ary ireo karazana valan'aretina maro. Heveriny fa ny fahantran'izy ireo no mitarika ny sasany amin-dry zareo handika lalàna sy hihetraketraka ary hangalatra.
Mitantara [bn] ny tanànan-drazany, Bogadia, any amin'ny distrikan'i Noakhali i Hasina Akhter, izay mirehareha amin'ny fanànana ny ankamaroan'ireo filàna fototra toy ny herinaratra, rano ary entona.
Namoaka lahatsoratra momba ny rariny ho an'i Nadine sy Rahela, vehivavy Bangla anankiroa niharan'ny herisetra an-tokatrano ny Dr. Kathryn B Ward avy ao amin'ny Nari Jibon ary nampifanaraka ny bilaogin'ny Nari Jibon amin'ny tontolon'ny bilaogy bangla izay mavitrika miady ho an'ity resaka ity. Farany, ny amin'ilay rivodoza namono olona Sidr izay nandalo teto Bangladesh tamin'ny Alakamisy alina lasa teo no ifantohan'ny fanahian’ ny Dr Ward .
Nizeria 17 ora izay